မြောက်ကိုရီးယားက အရှေ့ပင်လယ်ထဲသို့ တာတိုပစ်ဒုံးကျည်နှစ်စင်းပစ်လွှတ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားပြောကြား - Xinhua News Agency
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် ရထားပေါ်မှ နေ၍ ကီလိုမီတာ ၈၀၀ အကွာအဝေးရှိ ပစ်မှတ်အား ထိမှန်စေခဲ့သော ဒုံးကျည်တစ်စင်း ပစ်လွှတ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-KCNA via Xinhua)
ဆိုးလ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ (DPRK) သည် အရှေ့ပင်လယ်ပြင်ထဲသို့ တာတိုပစ်ဒုံးကျည်နှစ်စင်း ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ် (JCS) က ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်သည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမြို့ Hamhung ၏အရှေ့မြောက်ဘက်မှ အရှေ့ဘက်ပင်လယ်ထဲသို့ ပစ်လွှတ်လာသည့် တာတိုပစ် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ဟု ယူဆရသည့် ဒုံးကျည်နှစ်စင်းအားဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီ (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၂၃၀၀) ခန့်နှင့် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈း၀၅ နာရီ (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၂၃၀၅) တွင် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း JCS ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၎င်းဒုံးကျည်များသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၂၀ကီလိုမီတာလောက်မှ အကွာအဝေး ၁၉၀ ကီလိုမီတာလောက်အထိ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တောင်ကိုရီးယားနှင့် အမေရိကန်တို့၏ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိများသည် အဆိုပါ ဒုံးကျည်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စိစစ်လျက်ရှိကြောင်း JCS မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်သည် သက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နောက်ထပ်ပစ်လွှတ်မှုများအတွက် အသင့်အနေအထား ပြင်ဆင်ထာကြောင်း JCS မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ သမ္မတဦးဆောင်သော အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ (NSC) သည် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပြီး မကြာသေးမီက ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုအပေါ် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယား၏ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုများသည် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နှင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးအတွက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း၏ တောင်းဆိုမှုကို ဆန့်ကျင်ရာ ရောက်ကြောင်း NSC အဖွဲ့ဝင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်နှင့် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တို့တွင် အသံထက်မြန်သော ဒုံးကျည်အပါအဝင် ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုလေးကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် မီးရထားမှ သယ်ဆောင်လာသော တာတိုပစ် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် ၂ စင်းနှင့် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် နည်းဗျူဟာမြောက် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် ၂ စင်းအ သီးသီး ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယားက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားသည် ခရုဇ်ဒုံးကျည်များဟု ယူဆရသည့် အမျိုးအမည်မသိ ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကို အရှေ့ပင်လယ်ထဲသို့ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်က ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
3rd LD Writethru: S. Korea says DPRK fires2short-range projectiles into eastern waters
SEOUL, Jan. 27 (Xinhua) — The Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) fired two short-range projectiles into its eastern waters, South Korea’s Joint Chiefs of Staff (JCS) said on Thursday.
The JCS said inastatement that the South Korean military detected two projectiles, presumed to be short-range ballistic missiles, which were launched northeastward into the East Sea from areas in the DPRK’s east coastal city of Hamhung at about 8:00 a.m. (2300 GMT Wednesday) and 8:05 a.m. local time (2305 GMT Wednesday).
South Korea’s presidential National Security Council (NSC) held an emergency meeting, expressing its regrets over the DPRK’s recent missile tests.
The South Korean military said the DPRK launched two unidentified missiles, believed to be cruise missiles, into the East Sea on Jan. 25. Enditem